महेश खरेल, मेयर, पाँचखाल नगरपालिका/ नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंबाट ५० किलो मिटर पूर्वमा अवस्थित काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिका तरकारी उत्पादनका लागि प्रख्यात छ । ‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ भन्ने नारा सार्थक बनाउने अभियानमा जुटेका छन् नगर प्रमुख महेश खरेल । कृषिलाई विषादीमुक्त बनाउन नगरले र लभ ग्रीन नेपालसँग मिलेर जापान सहयोग नियोग (जाईका)को सहयोगमा ५ करोडको परियोजना सुरू गरेको खरेल बताउँछन् ।
साविकका ७ ओटा गाँउ विकास समिति (पाँचखाल, होक्से, देवभूमि बालुवा, अनेकोट र साठीघर भगवती, खरेलथोक र कोशीदेखा) मिलाएर पाँचखाल नगरको नयाँ भौगोलिक संरचना बनेको छ । ३८ हजार जनसंख्या रहेको यो नगर १३ वडामा विभाजित छ । काभ्रेमा क्षेत्रफलको आधारमा पनौतीपछिको दोस्रो ठुलो नगरपालिका पाँचखाल कृषिको प्रचूर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिर, अनेकोट भ्यू टावर, दुग्धेश्वरी मन्दिर, सुनकोशी बगर आदि परिचित छन् ।
यस्तो सम्भावना बोकेको यस नगरको विकास निर्माणका लागि दत्तचित्त युवा नगर प्रमुख खरेलले निर्वाचनका बेला जनता समक्ष थुप्रै वादा र वाचा गरेका थिए । ती वाचा यसअवधिमा के कति सुरुआत भए र कति पुरा भए वा सुरु नै गर्न सकिएको छैन्, भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अमरवाणी डट कमले नगर प्रमुख खरेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत उक्त कुराकानीको सार संक्षेपः
निर्वाचनको बेला जनतासँग गरेका बाचा के कति पूरा गर्नुभयो ? यहाँले दिएका आश्वासन के–के पूरा भए ?
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्षदिन पुग्दैछ । चुनावी अभियानका क्रममा गरिएका विकास निर्माणका बाचाहरुलाई मैले पटक्क बिर्सेको छैन् । तिनै बाचालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मैले नगरको कामको सुरूवात गरेको छु । सबै बाचाहरु एकै वर्षमा पूरा हुन सम्भव पनि छैन् । सुरू गर्न जति सम्भव छन् ती प्राथमिकतामा राखेर बजेटलाई दृष्टिगत गर्दै केही कामहरू अगाडि बढाएको छु । मेरो कार्यकालभित्र जनसमक्ष गरेका बाचाहरूलाई पुरा गर्न म प्रतिवद्ध छु ।
यसक्रममा हामीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भूकम्प पीडित जनताका लागि काँचो इँटाबाट घर बनाउन पाउने सुविधा दिएका छौँ । दुई कोठे घर बनाउनका लागि नगरपालिकामा आएर नक्सापास गर्नु पर्दैन । विवादित जग्गा छैन भने वडामा रू १५ सय तिरेर सिफारिश लिएर प्राविधिकको निरीक्षणमा घर बनाउन सकिन्छ । अर्को कुरा काठमाडांै विश्वविद्यालयको एग्रोटेक कलेज ल्याउनको लागि अनेकोटमा ५ सय रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरिसकेका छौँ । यो निर्णय वन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटमा पुगिसकेको छ । त्यहाँ कृषि र प्राविधिक संकाय ल्याउनका लागि धेरै काम अघि बढिसकेको छ । स्थानीय जनताहरूले घर बनाउन पाउन् भनेर बाटोको मापदण्ड सुधार्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ ।
अहिले बाटोको मापदण्ड कति रहेको छ ?
पहिले आवश्यक भन्दा धेरै ३० मिटरको मापदण्ड लागू गरिएको रहेछ । अरनिको हाईवे बाहेक पाँचखाल नगरभित्र आगामी ५० वर्षसम्म ३० मिटरको बाटो आवश्यक नपर्ला भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । ६ मिटरभन्दा कम नगरिकन आवश्यकताको आधारमा बाटोको मापदण्ड तयार गरिरहेका छौँ ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कालागि तोकेका कार्य के भइरहेको छ ?
सेजको लागि भनेर बजेट छुट्टिइसकेको छ । सेज निर्माण गर्ने परियोजना काम अब चाडै सु्रु हुन्छ । हामीले पाएको जानकारी अनुसार अहिले २२ करोडको टेण्डर आह्रवान भएको छ ।
कोशीदेखा, खरेलथोक र होक्से जस्ता पहाडी इलाकामा विकास निर्माणका के कस्ता कामहरु भइरहेका छन् ?
कोशीदेखामा केन्द्रीय सरकारबाट बिनियोजित १३ करोड रुपैयाँले खरेलथोक–कालिन्जोर मुनिसम्म बाटो पिच गर्नका लागि कटिङको काम सकिइसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षसम्म त्योे बाटो पिच हुन्छ । लामिडाँडा हुँदै पलाञ्चोक जाने बाटो दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र भएकाले सडक विभागसँग समन्वय गरेर केन्द्रीय सडक विभागकै ४ करोड रुपैयाँमा सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्र गतिमा भईरहेको छ । अनेकोट र धुलिखेलको तलको झिकुखोलाको मुहानबाट ड्याम (ड्याम) बनाउनका लागि अनुगमन गर्न विभिन्न कम्पनीहरुसँग छलफल भइरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि सडक स्तरोन्नतिका कामहरु भईरहेका छन् ।
यो वर्षको हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता खानेपानी हो । सबै वडामा खानेपानी उपलब्ध गराउन विभिन्न स्थानमा डीप बोरिङका योजनाहरु सञ्चालन गरेका छौँ । कतिपय ठाउँमा डीप बोरिङका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । आजसम्म ओझेलमा परेको बालुवाको ठकुरी गाउँमा डीप बोरिङका लागि हामीले ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएका छौँ । कोशी देखामा नवज्योति भन्ने संस्थासँग सहकार्य गरेर ७ देखि ८ करोडको लागतमा खानेपानीको योजना सुरु गरेका छौँ । नगर विकासको सहयोगमा पाँचखालको बृहत खानेपानी आयोजना परेको छ । ६ नम्बर र ५ नम्बरका सबैको सहयोग भयो भने ३ वर्षभित्रमा त्यो बृहत् योजना पनि लागू सञ्चालनमा आउने छ । सिँचाईको डिपीआर पनि हामी चाँडै बुझाउँदै छौँ । हामीले रिङरोड बनाउने विषयको पनि निरीक्षण गरिरहेका छौँ । शिखरपुर जाने बाटोमा भवन डिभिजनको सहयोगबाट ५ करोडको टेण्डर लागिसकेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि के कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ?
शिक्षा संविधानत जनताको मौलिक अधिकार हो । कक्षा १ देखि ८ सम्म अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र राखिएको छ । तर,यहाँ शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने हामी धेरै नै पछाडि छौ । सरकारी तलब खाने कतिपय शिक्षकहरु पढाउने निहुँमा पार्टी र आप्mनो व्यक्तिगत काममा बढी लागेको पाइएको छ । त्यसलाई निरुत्साहित गरि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै पाँचखालका शिक्षा प्रेमीले चाहेको जस्तो शिक्षा नीति तयार पार्ने तर्फ हामी केन्द्रित भएका छौँ ।
प्रधानाध्यापक, व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष्य , वडाध्यक्ष्य , कार्यापालिकाका सदस्य सहित यहाँका शिक्षाविद्हरुसँग हामिले एउटा शैक्षिक अन्तक्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छौं । अब निकट भविष्यमा शिक्षविद् संलग्न एउटा विज्ञ समिति गठन गर्नेछौं । विज्ञ समितिको सल्लाह र सुझावलाई गाईड लाईन मानेर शिक्षा नीति निर्माण गर्नेछौं । बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य माथि अब कसैले पनी खेलवाड गर्न नसक्ने गरी शिक्षा नीति बनाउनेछौं । शिक्षा समिति गठन गरेर यी सबै कामहरु सुरु गर्नेछौँ ।
यी बाहेक अन्य विकास निर्माणका योजनाहरु के– के छन् ?
उद्योग धन्दा गर्न चाहने कोही छ भने हामीले उहाँहरुलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ । वडा नं ५ को खावाभन्दा तल एउटा ठूलो होटल बन्दै छ । यसले पाँचखाल नगरपालिकाका ५ सय युवायुवतीलाई रोजगारी दिने बचन दिएको छ । विभिन्न औषधि बनाउने कारखानाको शिलान्यास भईसकेको छ । हाम्रो प्रमुख योजना रोजगार सिर्जना गर्नु र युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनु हो ।
लभ ग्रीन नेपालसँग अगुवा कृषकहरु बसेर तयार पारेको प्रस्तावको आधारमा जाइकामा रु ५ करोडको योजना पनि स्वीकृत भएको छ । यहाँको बारेमा किसानहरुलाई सबै थाहा नहुन पनि सक्छ । कृषि क्षेत्रलाई विषादीमुक्त बनाउन कृषकलाई जैविक मल बनाउन सिकाउने र जैविक औषधि प्रयोग गर्न सिकाउने कार्य पनि हामीले यो वर्षबाट सुरू गर्दैछौ । तालिमका लागि अगुवा कृषकहरु छान्ने काम वडा÷ वडामा सुरू हुँदैछ । अर्कोतर्फ हाम्रो लक्ष्य भनेको किसानहरुलाई प्रविधिसँग परिचित गराउने हो । यसका लागि विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायसँग छलफल भईरहेको छ ।
इँटा भट्टाहरुले धेरै प्रदूषण फैलाइरहेका छन्, तिनलाई हटाउने नगर कार्यपालिको निर्णय लागू गर्न सक्नुहुन्छ ?
आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म पाँचखाल नगरपालिकामा एउटा पनि इँटा भट्टा थिएन । सङ्क्रमणको फाइदा उठाएर केही व्यवसायीहरू भट्टा खोल्न सफल भए । हाम्रो कार्यकालमा एउटा पनि इँटा भट्टालाई दर्ता गर्न दिइएको छैन । हाम्रो सहमति अनुसार इँटा भट्टका व्यवसायीले आगामी वर्ष इँटा निर्माणका लागि पेश्की बाड्न पाउनु हुन्न । पेश्की बाड्नु अघि व्यवसायीहरुले वडाध्यक्ष,नगरपालिकाको प्रतिनिधि र यो क्षेत्रका जनता सहितको सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्दछ । इँटा भट्टा रहने कि नरहने जनता तथा जनप्रतिनिधिको मागमा भर पर्दछ । नगरबासीको स्वास्थ्यमाथि कसैले पनि खेलबाड गर्न पाउँदैन । परम्परागत इँटाको विकल्पका लागि हामीले नयाँ प्रविधि अपनाउनु पर्छ । प्रदूषण नफैलाउने उद्योगको स्थापना हाम्रो प्राथमिकता हो ।
नगरको विकासका लागि तपाइँका मुख्य प्राथमिकता के–के हुन ?
विकास निर्माण निरन्तर चलिरहने पक्रिया हो । त्यसैले यत्तिमै सकिन्छ भन्नेपनि छैन । तैपनि नगरप्रमुखको हैसियतले भन्नुपर्दा पाँचखाल नगरको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा,पिउने पानी,कृषि,सडक र सिँचाईका लागि बाँध (पोखरी) लाई राखेको छु ।
प्रकाशित ६ जेठ २0७५ , आइतबार | 2018-05-20 10:42:21